शेयर गर्नुहोस - Page3of 60 - जनचेतनाका लागी समाचार
नेकपाले MCC पास नगरे कांग्रेससंग मिलेर सरकार बनाउने ओलीको तयारी
सवारी सधान किन्दै हुनुहुन्छ ? यहाँ पाईंदै छ ४५ हजारमा बाइक र ९५ हजारमा कार!
छोरी जन्मेकै कारण अस्पतालामा सुत्केरी श्रीमतीलाई छोडेर भागे श्रीमान्: आखिर किन ?
नेपालमा कोरोना भाईरसका बारेमा भयो डरलाग्दो खुलासा: पुरै पढ्नुहोस
काम गर्दा कहिलै बार हेर्नुभएको छ? छैन भने हेर्नुस यी बार काम गर्दा हुन्छन यति धेरै फाइदा
भारतले खोल्यो रहस्य, ७० वर्षदेखी कालापानी भारतको भएको बतायो: ( भिडियो हेर्नुहोस)
सोनिकासगँको सम्बन्धको खुलासा भएपछी पारशले गरे जोगि बन्ने निर्णय: पुरा विवरण हेर्नुहोस
केकि अधिकारी चडेको गाडिको दुर्घटना: यस्तो छ उनको अवस्था
मन्त्री मगर भन्छन मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न, छिटै उद्घाटन गर्दैछौं
Sunil Subedi5days ago
खानेपानी मन्त्री विना मगरले बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी गराउनुभएको छ । आइतबार खानेपानी मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी गराउनुभएको हो । साथै, मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन पनि छिटै गरिने जानकारी दिनुभएको छ । आइतबार (आज) बिहानबाट मेलम्ची खोलाको […]
प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने ओलीको यस्तो खेल
काठमाडौं । बरु पार्टी फोड्ने तर पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई सत्ता नछाड्ने ! नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो सन्देश दिइसकेका छन् । उनले आफ्ना निकटस्थलाई लगाएर नेकपा एमाले पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि खटाइसकेका छन् । नाम दर्ता गर्न पुगेकाहरुको सम्बन्ध ओली निकटस्थहरुसँग […]
पर्बत । पहिरो अनि बाढिको जोखिममा पर्वत अनावश्यक रुपमा खनिएका बाटोहरुको कारण पर्वतमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ । फलेवास नगरपालिकाको अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारको बजेट आवश्यक ठाउँमा प्रयोग नभएको देख्न सकिन्छ । फलेवास नगरपालिकाको मुख्य बाटोकै भल नियन्त्रण गर्न नसकिराखेको अवस्थामा साखा बाटोहरु के को लागि ??दैलोदैलोमा मोटरबाटो पुगेको […]
नेकपा विभाजन नहुने ओली ५ वर्ष प्रधानमन्त्री रहने
saharasandes7days ago
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र देखिएको संकट तत्कालका लागि टरेको छ । आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिचको निर्णायक भनिएको वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा सकिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रवार बसेको बैठकमा दुवै अध्यक्षले मन माझामाझ गरेका थिए […]